TSY FAHAMPIAN’NY SOLIKA AO SAMBAVA : Mahazo vahana ny delestazy, sahirana ny mponina
Misedra olana goavana ny mponina any amin’ny tapany Avaratry ny Nosy iny manoloana ny tsy fahampian’ny solika. 22 août 2019
Misy fiantraikany betsaka amin’ny fiainam-bahoaka ao an-tampon-tanànan’i Sambava izany raha ny angom-baovao voaray ka ny resaka fahatapahan-jiro no tena manahirana indrindra. Matetika mantsy dia saika ny delestazy hatrany no mitranga rehefa tsy misy ny solika izay tokony hampandeha ara-dalàna izany ao amin’ity Faritra ity.
Raha ny fanambarana avy amin’ny tompon’andraikitry ny Jirama, omaly izao dia tsy maintsy hisy aloha ny fahatapahana. Nohazavain’ny Talen’ny Jirama (Sous groupement Sambava), Rabe Antoine Hubert tamin’izany fa "noho ny fahataran’ny gazoaly sy lasantsy izay tokony hamatsiana ny tahiry dia tsy maintsy misy fahatapana ny jiro eto Sambava. Hiverina handeha anefa ny jiro rehefa tonga ny fiarabe avy any Antalaha sy Vohémar hitondra ny solika eto amintsika". Hetahetan’ny mponina ao an-toerana moa ny hitondrana vahaolana maharitra momba ity raharaha ity.